Maxaad kala socotaa Xogta Hoose ee uu Daahir Abdulle Duubane ku guursaday Xaaskiisa Sahra Shariif? | Dadweyne – U Adeegaha Dadweynaha
Akhristayaal, Xigasho, Xaqiiqo-raadin iyo Xooraansi dheer kadib, waxaan maanta idiin soo gudbin doonaa Warbixin ay Sawirro ku lifaaqan yihiin, kuwaasi oo aynu raad-raac dhab ah ku ifinayno waxyaabo badan oo idinka dahsoonaa.
Dahir Abdulle Alasow, waa Milkiilaha Waagacusub iyo in ka badan 35-Websites uu ugu talagalay inuu Ummadda isaga aflagaadeeyo, isla markaana uu dadka ugu hanjabo, lacago baad ahna kaga qaato.
Dahir Duubane waxa uu bartamihii sannadkii 2008-dii magangelyo qaxootinimo ka helay dalka Holland, isagoo huwan Shaarka Saxafinimo.
Dowladda Holland wey ku fududaatay inay Dembiile Daahir iyo kuwa la midka ah siiyaan Maagngeliyo iyo Deganaansho.
Markii uu Holland tegay waxa uu galay Xero Qaxooti oo ay ku jireen Qaxooti Magangelyo-doon ah oo u kala dhalatay dalalka Somalia, South Sudan, Ethiopia, Eritrea iyo kuwo kale.
Waxay Xeradda isku barteen gabar Soomaali ah oo lagu magacaabo Sahro Shariif, oo ku dhalatay Degmadda Gelinsoor oo ku taalla inta u dhexeyso magaalladda Gaalkacayo iyo Degmadda Cadaado ee Gobalka Mudug.
Sahra Shariif oo ka soo jeeda Qoys Reer Miyi ah, waxaa Nidaam Is-xambaar ah looga soo dhoofiyey magaalladda Nairobi sannadkii 2007-dii, iyadoo la geeyey dalka Holland.
Inkastoo uu dhaqankii Reer Miyiga ka muuqday markii la geeyey dalka Holland, waxay haddana dadaal u gashay inay iska dhigto qof Reer Magaal ah, waxayna jaal la noqotay inta badan raggii sokeeyaha iyo shisheeyaha ahaa ee ay kula jirtay Xeradda.
Waana halkaasi meesha ay isku barteen Daahir Duubane oo isagu Holland tegay bartamihii sannadkii 2008-dii.
Waxa uu ku bilaabay Xod-xodasho iyo inuu isugu muujiyo inay isku beel yihiin, maadaama ay Sahro Shariif ka soo jeedo Beesha Sacad, Jufada Reer Jalaf, isla markaana ay ilmo adeer yihiin Hoggaamiye-kooxeedkii Cabdi Shukri oo qeyb ka ahaa Isbahaysigii Argagixiso-la-dirirka muddadii u dhexeysay sannadihii 2005-tii ilaa bartamihii 2006-dii.
Dahir Duubane oo isagu marba qabiil sheegta, waxa uu gabadhii isugu sheegay inay Walaalo yihiin Xuseen Cayiid, oo uu isaguna yahay Ina Jeneral Maxamed Faraax Xasan “Caydiid”.
Sahra Shariif oo aan sidaas u feejignayn, balse uu Qabiilku ku weynaa waa la il-duufsaday, waxaana laga dhameeyey inay is-guursadaan. Inta Xeradda lagu jiray ayaa Sheekh Soomaali isku mehriyey dabayaaqadii sannadkii 2008-dii.
Bartamihii sannadkii 2009-kii ayey u dhashay wiil uu ugu waqlalay Cabdulle Daahir Cabdulle Calasow Duubane.
Dadka sida hoose ula socday arrimahooda waxaa ka mid ah Jaamac Cilmi oo ka soo jeeda Jufada Nimcaale ee Beesha Sacad, ayaa waxa uu mugdi geliyey inuusan Dahir dhalin wiilka, balse uu Sahra Shariif guursaday iyadoo uur u leh Nin Ethiopian oo lagu magacaabo Wondimu oo ay ku saaxiibeen Xeraddii Qaxootiga oo ay xilligaasi ku sugnayd.
Waxay noqotay qof go’doon galay markii ay guursatay Daahir Calasow, waayo Reerkeeda ama Familkeeda wey wada dayriyeen, markii ay maqleen inay guurstay nin iska sheegta Jufada Reer Jalaf ee Qabiilka Sacadka.
Mashaqo waa tanoo kale baa la dhihi jirey marka ay Xaajo sirxanto, waxaa la sheegay in naxdintii Waalidkeeda ay sababtay inaysan Dahir ilmo kale u dhalin ilaa iyo xilligan oo markii ay is-guursadeen laga joogo 6-sanno.
Waxay isku hawshay inay iska fasaqdo Dahir, weyse u suurto-geli la’dahay, maadaama aysan haynin dad ehel ama saaxiib la ah oo gacan ku siiya arrintaasi, iyadoo Ehelkeeda jooga Europe iyo Somalia horey u dayriyeen markii ay guursatay Dahir Duubane oo asal ahaan ka soo jeeda Beesha Galgala ama Nuux Maxamuud.
Fannaanadda weyn ee Ayaan Kampala oo ay Sahro Shariif ku saaxiibeen magaalladda Kampala ayey ku qarsatay Oraahdan: “Ninkaan dadkayga wey igu dayriyeen, ku-dhawaad 7 sanno carruur kama helin, waxaana ka la’ahay Noloshii Gogosha, waayo maalintii oo dhan wuu jiifaa, habeenkiina markaan seexdo ayuu soo kacaa, wuxuuna ku mashquulaa Kombiyuutarkiisa”.
“Dahir Dubane weligiisa haween uu guursaday qabiilkiisa runta uma sheegin” sidaas waxaa yiri saaxiibkiisa Xuseen Caydiid,
waxaana jirta Xilligii uu Mooryaanka ahaa inuu labo jeer guursaday, iyadoo mid si khasab ah looga furay, halka midda kalena iska fasaqday.
Mid ka mid ah Xaasaskiisa hore waxay deggan tahay Xaafadda Suuqa Xoolaha ee Degmadda Heliwaa’ , Ex-Farmashiyihii Waagacusub oo uu Daahir ka shaqeyn jirey, waana halka uu magaca Websaytka Waagacusub ka soo minguuriyey.
Xaaskaasi hore waxay u dhashay 2-gabdhood iyo hal wiil.
Waxaa kaloo jira Wiil Bah gooni ah, kaasi oo ay isaga iyo Hooyadiisa ku nool yihiin Degmadda Wadajir, gaar ahaan agagaarka Guriga Ex-Guddoomiyihii hore ee Degmadda Wadajir, Axmed Daaci.
Wiilkaasi oo da’diisa lagu sheegay 17-18 jir waxa uu wax ku qoraa qaar ka mid ah Websaytyadda Aabihiisa, wuxuuna iskala nool yahay Ilaaladda Axmed Daaci.
La soco Qeybaha Kale ee Warbixintan Taxanaha ah.
Akhriste wixii aad kala socotid sheekadan Taxanaha ah noogu soo dir E-mailkan: dadweyne1@gmail.com
Previous: Hay’adda CCA oo Tartan Ciyaareed ku soo gebagebysay Degmadda Shingaani.
Next: Gaalkacayo oo lagu hardamayo iyo qax cusub oo bilowday